IBM Inovhara Nhoroondo Kuwanikwa kweRed Hat ye $ 34.000 Bhiriyoni | Linux Vakapindwa muropa
IBM inovhara nhoroondo $ 34.000 bhiriyoni kuwanikwa kweRed Hat
IBM yakatanga kutenga chiratidzo chakakosha iyo yakave yakanyanya kudhura munhoroondo panguva ino, sezvo ichiita zviuru makumi matatu nezvina zvemadhora. Saka IBM inochengetedza yakakurumbira Red Hat tekinoroji. Iko kufamba kune hunyanzvi sezvo kuchitsanangura iro ramangwana reakavhurika mahybridi gore. Nenzira iyi, hofori yebhuruu inozviisa pachayo seinotungamira gore mupi uye inokasira IBM yepamusoro-kukosha bhizinesi modhi.
Iye zvino IBM ine tekinoroji yese uye Red Hat hunyanzvi kugona kusvika kune yakawanda vatengi. Asi vashandisi veRHEL havafanirwe kunetseka nezvazvo, sezvo IBM inochengetedza rusununguko rweRed Hat uye kusarerekera. Nenzira iyi, yekupedzisira ichasimbiswa uye vatengi vacharamba vachikwanisa kusarudza zvakasununguka uye nehukuru hwekuchinjika sepakutanga.
Kune rumwe rutivi, Kuzvipira kwakasimba kwaRed Hat kuvhura sosi hakuchinje mushure mekutenga IBM. Saka hatifanire kunetseka nezvemamwe mapurojekiti akaita seFedora, iyo inofambiswa neRHEL, uye zvakare CentOS, inofambiswa neRHEL haifanire Icho chimwe chezvinhu izvo vamwe vashandisi vanobvunza zvakanyanya uye izvo zvavanonetsekana nazvo. Kunyange zvakadaro, tichava nehurukuro yega yega neRed Hat munguva pfupi apo mibvunzo yakawanda yakaoma pamusoro penyaya dzavo uye zvakare pamusoro peRHEL8 ichajekeswa. Gara wakatarirwa LxA!
Chii chiri chokwadi ndechekuti IBM ikozvino mune yakasimba nzvimbo pamwe neRed Hat kuendesa inotevera-chizvarwa chemasanganiswa multicloud chikuva. Saka iwe uchave unokwanisa kurwa nesimba rakakura kurwisa dzimwe nzira dzakadai seAWS's Amazon, gore reGoogle, kana Azure yeMicrosoft. Aya mahofori matatu anotonga chikamu neruoko rwakasimba, asi ikozvino vauya nemukwikwidzi anofanirwa kuvanetsa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM inovhara nhoroondo $ 34.000 bhiriyoni kuwanikwa kweRed Hat
SteamVR Beta nyowani nekuvandudza kweLinux
OpenEXPO Europe 2019: pfupiso yechiitiko chakapfuura